လူတဈယောကျကို စိတျဆိုးလိုကျပွီဆိုရငျဟိုလူက ဘာမှ မဖွဈသေးဘူး။ကိုယျ့မှာ စိတျဒဏျရာဖွဈနပွေီ။ - Tameelay
လူတဈယောကျကို စိတျဆိုးလိုကျပွီဆိုရငျဟိုလူက ဘာမှ မဖွဈသေးဘူး။ကိုယျ့မှာ စိတျဒဏျရာဖွဈနပွေီ။
အလုပျကနေ အိမျကိုပွနျရောကျတယျ။ဒါပမေဲ့ အလုပျမှာ အဆငျမပွတောတှေ၊ဘယျသူက ငါ့ကို ဘယျလိုလုပျလိုကျတယျ။
ငါ့ကို မကူညီဘူး။ အဲ့ဒါကို စမွုံပွနျပွီးတော့ခဏခဏတှေးနရေငျ ..ဟိုတဈယောကျကတော့သူ့အိမျမှာ သူက ငွိမျ့နတော။ကိုယျကတြော့ ကိုယျအတှေးနဲ့ ကိုယျဒီမှာ ဒုက်ခရောကျနတေယျ။စိတျဒဏျရာဖွဈစတေယျ။ဒါ့ကွောငျ့ တှေးတယျဆိုရငျစိတျဒဏျရာမဖွဈအောငျ တှေးပါ။ အဗြာပါဒ သင်ျကပ်ပ။
သမ်မာသင်ျကပ်ပကို မှနျကနျတဲ့ စိတျခံစားမှုလို့ ပွောတာက မှနျကနျတဲ့စိတျခံစားမှု ရှိမှ မှနျကနျတဲ့အတှေး တှေးနိုငျတာ။ဥပမာ ကိုယျက လူတဈယောကျနဲ့ မတညျ့ဘူးဆိုရငျအဲ့ဒီလူအကွောငျးတှေးတဲ့အခါမှာငါ့ရဲ့emotion – ငါ့ရဲ့ စိတျခံစားမှု မှနျရဲ့လား။ငါ့ရဲ့ စိတျခံစားမှုက ငါ့ကို ပွနျပွီးတော့ ဒဏျရာဒဏျခကျြဖွဈအောငျ လုပျနသေလား။
ကိုယျ့ကိုယျ ပွနျစဉျးစား၊ ပွနျသုံးသပျရမယျ။စိတျဒဏျရာဒဏျခကျြ ဖွဈအောငျ ပွနျပွီးတော့ လုပျနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျ ခဈြရာမရောကျဘူး။ကိုယျ့ကိုယျ မတ်ေတာထားရာမရောကျဘူး။
ကိုယျ့ကိုယျ မတ်ေတာထားရာရောကျအောငျ ဆေးထညျ့ပွီးတော့ အနာကကျြအောငျ၊အနာပြောကျအောငျ healing လုပျသလို ဒီစိတျဒဏျရာဒဏျခကျြကို ကုသပုံ ကုသနညျးရှာကို ရှာရမယျ။
သမ်မာသင်ျကပ်ပကို မှနျကနျတဲ့အတှေးဆိုပွီးတော့ပွောကွတယျ။ ဘာသာပွနျကွတယျ။ ဒါကလညျးပဲ မှနျတယျ။ Right Though, Right Thinking.
ဘုနျးဘုနျးက ထပျပွီးတော့ ဘာသာပွနျခငျြတာက မှနျကနျတဲ့စိတျခံစားမှု – Right Emotion .
ဘာဖွဈလို့တုနျးဆိုတော့မွတျစှာဘုရား ဖှငျ့ဆိုထားတဲ့ အဓိပ်ပာယျသုံးခုရှိတယျ။
မှနျကနျတဲ့ စိတျခံစားမှု – သမ်မာသင်ျကပ်ပ
အကွမျးမဖကျတဲ့အတှေး – အဝိဟိသ သင်ျကပ်ပ၊
ဒေါသမဖွဈ၊ စိတျဒဏျရာမဖွဈတဲ့အတှေး – အဗြာပါဒ သင်ျကပ်ပ တဲ့။
ကိုယျ့ဦးခေါငျး၊ ဆံပငျ မီးလောငျနတေယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ “နငျငါ့ဦးခေါငျးကိုဘာလို့မီးလာရှို့တာတုနျး ပွောစမျး” လို့အဲ့ဒီအဖွေ တောငျးနမေလား။
“ငါ ဘယျတုနျးက နငျ့ကို ဘာလုပျဖူးလို့တုနျး” လို့ အဲ့လို အဖွေ သှားတောငျးမလား။ဒါမှ မဟုတျရငျလညျးပဲ သူ့ကို “နငျက ငါ့ခေါငျးကို လာပွီးတော့ မီးနဲ့ရှို့တယျ” လို့ ပွောပွီး သူ့ကို လကျသီးနဲ့ လိုကျထိုးမလား။
“မငျးငါ့ကို ဒီလိုလုပျတယျ။ ရဲတိုငျမယျ” ဆိုပွီးတော့ ခေါငျးပျေါမှာ ရှိတဲ့မီးကို အရငျမငွိမျးဘဲနဲ့ iphone ကိုငျပွီးတော့ ရဲကို ဖုနျးဆကျမလား။
“မငျးငါ့ကို ဒီလိုလုပျတယျနျော” selfie ရိုကျပွီးတော့ Facebook ပျေါတငျမလား။ အဲ့ဒီလို လုပျမလား။ပရိတျသတျတို့ အဲ့ဒီလို လုပျမယျဆိုရငျအသကျပဲ ပါသှားမယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ အရေးကွီးဆုံးက ခေါငျးပျေါမှာမီးလောငျတာကို မီးငွိမျးဖို့ပါ။
စိတျထဲမှာရှိတဲ့ ဒေါသ၊စိတျထဲမှာ ရှိတဲ့ မခံခငျြတဲ့မာန၊ကိုယျ့ထကျ ညံ့တဲ့သူနဲ့တှမှေ့ ပြျောရှငျနိုငျတဲ့မာန၊ကိုယျ့ထကျသာရငျ ဘယျလိုမှ မကွညျ့နိုငျ၊မရှုနိုငျ စိတျမခမျြးသာနိုငျ၊ပီတိမဖွဈနိုငျတဲ့မာန၊ အဲ့ဒီ မာနတှေ ရှိတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ခေါငျးမီးလောငျတယျ။
မွနျမာစကားက “ကိုယျ့ခေါငျး မီးလောငျတယျ” ဆိုရငျ ခေါငျးထဲမှာ Negative emotion စားနပွေီလို့ ပွောတာ။ အဲ့ဒီဟာကို အရေးတကွီး ဖွရှေငျးရမယျ။
ပိုကျဆံပိုပွီးတော့ ဝငျအောငျ လုပျတာထကျပိုအရေးကွီးတယျ။
ကားကောငျးကောငျးစီးပွီးတော့ စိတျက ညဈနတေယျဆိုရငျ ဒီကား ဘာမှ သိပျတနျဖိုးမရှိဘူး။
ငါ ကားကောငျးကောငျးတော့စီးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဟိုဘကျလူတှကေငါ ကားကောငျး စီးရမှနျးလညျး မသိဘူး။ငါ သူဌေးမှနျးလညျး မသိဘူး။ငါ ပညာတတျမှနျးလညျး မသိဘူး။Ph.D ရမှနျးလညျး မသိဘူး။ငါ ဆရာဝနျမှနျးလညျး မသိဘူး။ငါ အငျဂငျြနီယာမှနျးလညျ မသိဘူး။
“ဒီလူတှကေ ငါ့ကို မလေးမခနျ့လုပျတယျ”ဆိုပွီး ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စိတျဒဏျရာဖွဈအောငျ လုပျနတေယျဆိုရငျ ဒီဘဝနနေညျး မမှနျဘူး…..
ဤခရီးလဈြလြူရှုခငျြလှပါဘိ တရားတျော အား ရေးသားပူဇျောပါသညျ။
လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ဆိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုလူက ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး။ကိုယ့်မှာ စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်နေပြီ။
အလုပ်ကနေ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာတွေ၊ဘယ်သူက ငါ့ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်။
ငါ့ကို မကူညီဘူး။ အဲ့ဒါကို စမြုံပြန်ပြီးတော့ခဏခဏတွေးနေရင် ..ဟိုတစ်ယောက်ကတော့သူ့အိမ်မှာ သူက ငြိမ့်နေတာ။ကိုယ်ကျတော့ ကိုယ်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ဒီမှာ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေတယ်။ဒါ့ကြောင့် တွေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ဒဏ်ရာမဖြစ်အောင် တွေးပါ။ အဗျာပါဒ သင်္ကပ္ပ။
သမ္မာသင်္ကပ္ပကို မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုလို့ ပြောတာက မှန်ကန်တဲ့စိတ်ခံစားမှု ရှိမှ မှန်ကန်တဲ့အတွေး တွေးနိုင်တာ။ဥပမာ ကိုယ်က လူတစ်ယောက်နဲ့ မတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူအကြောင်းတွေးတဲ့အခါမှာငါ့ရဲ့emotion – ငါ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု မှန်ရဲ့လား။ငါ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုက ငါ့ကို ပြန်ပြီးတော့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဖြစ်အောင် လုပ်နေသလား။
ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်စဉ်းစား၊ ပြန်သုံးသပ်ရမယ်။စိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ဖြစ်အောင် ပြန်ပြီးတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ် ချစ်ရာမရောက်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ် မေတ္တာထားရာမရောက်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ် မေတ္တာထားရာရောက်အောင် ဆေးထည့်ပြီးတော့ အနာကျက်အောင်၊အနာပျောက်အောင် healing လုပ်သလို ဒီစိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို ကုသပုံ ကုသနည်းရှာကို ရှာရမယ်။
သမ္မာသင်္ကပ္ပကို မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။ ဘာသာပြန်ကြတယ်။ ဒါကလည်းပဲ မှန်တယ်။ Right Though, Right Thinking.
ဘုန်းဘုန်းက ထပ်ပြီးတော့ ဘာသာပြန်ချင်တာက မှန်ကန်တဲ့စိတ်ခံစားမှု – Right Emotion .
ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သုံးခုရှိတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု – သမ္မာသင်္ကပ္ပ
အကြမ်းမဖက်တဲ့အတွေး – အဝိဟိသ သင်္ကပ္ပ၊
ဒေါသမဖြစ်၊ စိတ်ဒဏ်ရာမဖြစ်တဲ့အတွေး – အဗျာပါဒ သင်္ကပ္ပ တဲ့။
ကိုယ့်ဦးခေါင်း၊ ဆံပင် မီးလောင်နေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်မှာ “နင်ငါ့ဦးခေါင်းကိုဘာလို့မီးလာရှို့တာတုန်း ပြောစမ်း” လို့အဲ့ဒီအဖြေ တောင်းနေမလား။
“ငါ ဘယ်တုန်းက နင့်ကို ဘာလုပ်ဖူးလို့တုန်း” လို့ အဲ့လို အဖြေ သွားတောင်းမလား။ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်းပဲ သူ့ကို “နင်က ငါ့ခေါင်းကို လာပြီးတော့ မီးနဲ့ရှို့တယ်” လို့ ပြောပြီး သူ့ကို လက်သီးနဲ့ လိုက်ထိုးမလား။
“မင်းငါ့ကို ဒီလိုလုပ်တယ်။ ရဲတိုင်မယ်” ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့မီးကို အရင်မငြိမ်းဘဲနဲ့ iphone ကိုင်ပြီးတော့ ရဲကို ဖုန်းဆက်မလား။
“မင်းငါ့ကို ဒီလိုလုပ်တယ်နော်” selfie ရိုက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်မလား။ အဲ့ဒီလို လုပ်မလား။ပရိတ်သတ်တို့ အဲ့ဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင်အသက်ပဲ ပါသွားမယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးက ခေါင်းပေါ်မှာမီးလောင်တာကို မီးငြိမ်းဖို့ပါ။
စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဒေါသ၊စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မခံချင်တဲ့မာန၊ကိုယ့်ထက် ညံ့တဲ့သူနဲ့တွေ့မှ ပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့မာန၊ကိုယ့်ထက်သာရင် ဘယ်လိုမှ မကြည့်နိုင်၊မရှုနိုင် စိတ်မချမ်းသာနိုင်၊ပီတိမဖြစ်နိုင်တဲ့မာန၊ အဲ့ဒီ မာနတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ခေါင်းမီးလောင်တယ်။
မြန်မာစကားက “ကိုယ့်ခေါင်း မီးလောင်တယ်” ဆိုရင် ခေါင်းထဲမှာ Negative emotion စားနေပြီလို့ ပြောတာ။ အဲ့ဒီဟာကို အရေးတကြီး ဖြေရှင်းရမယ်။
ပိုက်ဆံပိုပြီးတော့ ဝင်အောင် လုပ်တာထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။
ကားကောင်းကောင်းစီးပြီးတော့ စိတ်က ညစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒီကား ဘာမှ သိပ်တန်ဖိုးမရှိဘူး။
ငါ ကားကောင်းကောင်းတော့စီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဘက်လူတွေကငါ ကားကောင်း စီးရမှန်းလည်း မသိဘူး။ငါ သူဌေးမှန်းလည်း မသိဘူး။ငါ ပညာတတ်မှန်းလည်း မသိဘူး။Ph.D ရမှန်းလည်း မသိဘူး။ငါ ဆရာဝန်မှန်းလည်း မသိဘူး။ငါ အင်ဂျင်နီယာမှန်းလည် မသိဘူး။
“ဒီလူတွေက ငါ့ကို မလေးမခန့်လုပ်တယ်”ဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ဒီဘဝနေနည်း မမှန်ဘူး…..
ဤခရီးလျစ်လျူရှုချင်လှပါဘိ တရားတော် အား ရေးသားပူဇော်ပါသည်။
(၁၅-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နံနကျ (၇:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး